Somali News 05.14.21 | KWIT
Ganacsiyada shaqsiyeed waxay yeelan karaan shuruudo gooni ah waana muhiim inaad raacdo tilmaamaha lagu taliyay oo aad ixtiraamto dadka kale. Waqtigaan la joogo, 33% dadka deegaanka ah ayaa loo tixgeliyaa in si buuxda looga tallaalay Degmada Woodbury. Macluumaadka ku saabsan tallaalada COVID-19 ama jadwalka ballan si loo helo tallaal waxaa laga heli karaa adigoo la xiriiraya Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland oo laga helo 279-6119 ama www.siouxlanddistricthealth.org.
Masuuliyiintu waxay dhaheen wadaadada kuxiran diimaha waa inay qorsheeyaan inay sii wadaan raacida qawaaniinta hada ee Mass ee dhamaadka todobaadkan. Borotokoolkaasi wuxuu ku baaqayaa waji-xidhashada in la xidho inta lagu guda jiro Masaajidada, iyo kala fogaanshaha bulshada dhexdeeda ee loo yaqaan 'pews' ee looga baahan yahay kaqeybgalayaasha aan wada nooleyn. Borotokoollada hadda jira ayaa dhaqan galay intii lagu jiray Palm Axaddii dabayaaqadii Maarso. Saraakiisha ayaa leh Bishop R. Walker Nickless, COVID-19 Task Force, iyo Xafiiska Cibaadada ayaa dib u eegi doona tilmaamaha cusub ee CDC sida ugu dhakhsaha badan.